Monday December 30, 2019 - 18:13:44 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Sida aynu ka wada warqabno muddo laba sano haatan laga joogo ayaa ka soo wareegtay maalintii xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ku dhawaaqeen in aany gelayn doorasho ay qabanayaan komiishankaa waqtigoodu dhamaaday. Si kasta waa la isugu deyey in xisbiga
Wadani lagu qanciyo in ay ogolaadaan in ay doorashada qabtaan gudidaasi, taasna dhaar bay ka mareen in aanay qabanayn doorashada goleyaasha degaanka iyo wakiilada komiishankaasi, iga oo keeni kari waayey eed cad oo ay u haystaan.
Gudidii doorashooyinka ee xisbiga Wadani ka dhaarteen waqtigoodii waxaa uu dhamaaday muddo bil haatan laga joogo, waxaana la sameeyey gudidi cusub oo doorashayinka wadi doona, taasna xisbiga Wadani ay diideen in ay xubintoodii keenaan.
Hadaba waxay ummadda reer somaliland la yaabtay markii ay xisbiga Wadani yidhaahdeen waxaanu aqbalnay in la soo celiyo gudidii doorashooyinka ee ay labada sanadood diidanaayeen, taasoo ummadda ku noqotay fajiciso iyo amakaag. Sidoo kale
muujinaysa in aan xisbiga Wadani doorasho diyaar u ahayn, balse xaalkiisu yahay ila
meerayso. Arrintani waxaa kale oo ay muujinaysaa in aanu xisbiga Wadani aanu lahayn qorshe siyaasadeed iyo mid hoggaamineedtoona, balse ay la mid yihiin koox riwaayad jilaya oo aan hadaf kale lahayn. Sidoo kale waxaa ka muuqata in xisbiga Wadani hoggaan xumo
baahsan iyo maamul xumo hadhaysay, taasoo keenaysa mustaqbalka in aanu sii jirin xisbiga Wadani, hadii aan la dabo qaban oo aan siyaasad xumada haysata aan wax laga bedelin.
Waxaa kale oo cad in shacabka reer somaliland ay si fiican u fahmeen in xisbiga Wadani, aanu doorasho diyaar ahayn, ka dib markii ay aqbaleen komiishankii ay diidanaayeen labada sanood ee buuxa, waxay shacabka somaliland fahmeen in xisbiga Wadani uu
doonayo muran iyo is qab-qabsi, balse aanu lahayn mustaqbal hoggaamineed oo uu dalka
iyo dadkaba ku maamulo aanu lahayn. Xisbiga Kulmiye iyo guud ahaan xukuumadda uu hogaaminayo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxay mudadaa diyaar u ahaayeen in dalka ay doorasho ka dhacdo,
waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen sidii ay xisbiga Wadani ugu qancin lahaayeen in ay doorasho galaan, balse taas waa loogu caal-waayey xisbiga Wadani, keli ah waxaa laga bartay muran iyo waa nala dhacay, taasina waa mid caado u noqotay
Ugu danbayntii waxaan odhan lahaa bulshada somaliland, si fiican baad u fahamteen in aan xisbiga Wdaani doorasho diyaar u ahayn, balse uu diyaar u yahay qas iyo muran joogta ah, waxaad ogtihiin in ay diideen in ay keenaan xubintii uga qayb geli lahayd
xisbiga Wadani oo ay la noqdeen, iyada oo ay waqtigan shaqaynayaan lixdii xubnood ee
Cabdilahi Axmed, Cabdilahi Yare.